Sales in Food / Beverage Production in Mandalay
Updated at: 04 November 2017
Yadanarbon Purified Drinking Water
Sales, MS Office, Supervision
- မိမိ အရောင်းအဖွဲ.အား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အရောင်း Channel များကို ကောင်းစွာ စီမံနိုင်ရမည်။ - Market Survey ပြုလုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - Customer Complaint ကျွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။ - အရောင်း Target ကို ပြည့်မှီအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - အရောင်း Target ကို ပြည့်မှီအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - Way Plan ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။New Outlet ရှာဖွေပေးနိုင်ရမည်။
- ဘွဲ.ရဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပြူ တာ ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အသက် (၂၅-၃၀)ဖြစ်ရမည်။ - အရောင်း အတွေ.အကြုံ (၅) နှစ် နှင့် အထက် ရှိပြီး၊ Supervisor လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ - မန္တလေးမြို.တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရမည်။
Yadanarbon is the old name of Mandalay and means the city of gems. Yadanarbon Water, established in Mandalay in 1994, is one of the oldest bottled water companies in Myanmar. For over 20 years, we have been serving more than 5,000 customers including households, schools, shops, hotels, and restaurants in Mandalay Region and Kachin State.